Internet-ka oo Soddon jirsaday – Puntland Post
Posted on March 12, 2019 March 12, 2019 by Liban Yusuf
Internet-ka oo Soddon jirsaday
Internet-ka ayaa la asaasay 12 March, 1998, oo hada laga joogo 30 sano, waxaana sameeyay Dr. Tim Berners-Lee oo hada u ololeeya in internet-ku inuu ahaado mid furan oo aan cidna xiran.
Shaqadii, maalgelintii iyo caqligii laysugu geeyey abuurida isgaarsiintaa qarsoon ama horumarsan ayaa waxay dhashay in la dhiso Internet-ka oo laysku xiro qalabka isgaarsiinta oo leh kumbuyuutar, radiyow, satilite iyo iwm. In la helo aalad casriyaysan oo ka kooban noocyo qalabyo kala duwan ah iyo waayiro lana dhiso borogaraamo xogta ka qaada meel ama kumbuyuutar (server) geeyana kumbuyuutar (server) kale iyada oo aan la dareemin ama la arki karin habka qoraalka ama isgaarsiinta laysugu gudbinayo.
Aaladda ama xogta samaynta Interne-tka waxa ay ku koobnayd oo keliya Jaamacado khaas ah, taliska ciidanka Maraykanka, iyo mac’hado/ jaamacado ku yaal qaybo ka mid ah Europe oo howsha cilmibaarista arinkaan casrigaa qayb ka ahaa.
Hadaba muddo kadib markii uu dhamaaday dagaalkii qaboobaa, ayaa farsamadii internet-ka waxaa la arkay in looga faa’iidaysan karo xagga bulshada iyo dhaqaalaha, sidaa awgeedna waxaa la ogolaaday in shirkadaha ganacsiga iyo shacabka loo bandhigo oo ay markaa la eego in dhinacayada horumarka looga faa’iidaysto aaladan sirta markii hore lagu abuuray. Xiliga la bilaabay in siyaabo kale looga faa’iideysto aaladan cusub ee internet-ka waxay soo bilaabatay horaankii 1970kii.
Hadaba Internetka aan hada naqaano waxa uu hirgalay markii Engineer Ingiriis ah oo dhalin yaro ah oo ka shaqeynayey machadka cilmibaarista Europe ee CERN uu soo saaray warqad uu ku soo bandhigayo hab cusub oo Interdnetka lagu hor marinkaro, qoraalkana ka dhigaya mid si caadi ah qofka qoraya/daabacaya iyo kan akhrinayaba ay uwada arkaan sidaasna ku gudubta oo qofkii ay u socotay ugu tagta meel kasta oo uu caalamka ka joogo iyada oo aan loo baahnayn in borogaraam kale la qoro si loo soo akhriyo ama kumbuyuutarka ay timi u fahmo.
Waxay ahayd Maarso 12, 1989 taas oo hada laga joogo 30 sano, Ninka sameeyey waxaa la dhahaa habkaas cusub Dr. Tim Berners-Lee oo hada u ololeeya in internetku ahaado mid furan oo aan cidna xiran.
Soo saaristii World Wide Web (WWW) ee bishii Maarso 12, 1989, waxay dhalisay in Internetka qof kasta uu si sahlan u adeegsado, wax ku qoro, ku ganacsado, ku siyaasadeeyo, wax ku barto iwm. Waxaa bilaabatayhoraankii 1990-gii khaasatan 1994/95 in shirkadihii ugu horeeyey ee ku dhisan online ay bilowdaan oo ay samaysmaan sida shirkada weyn ee Amason, E-bay iwm, isla markaasna ay hirgasho in lacag laga sameeyo Internetka iyo dhaqaale. Waxaa kaloo iyana bilowday in shirkadaha caadiga ahaa ee horey u jiray, laamaha dowladda iyo cidkasta ay samaysato boggag Internet oo ay fariimahooda ku soo gudbiyaan iyo ganacsigooda, fikirkooda, waxqabadkooda, ra’yigooda, siyaasadooda iwm.